Jet Lag: ဒီဟာကဘာလဲ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရှိန်မြှင့်အောင်ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Miguel Serrano | | လူနေမှုပုံစံစတဲ့
စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အခြားအချိန်ဇုန်သို့သင်ပျံသန်းဖူးပါသလား။ Jet Lag ဟုခေါ်သောရောဂါကိုသင်သံသယမရှိဘဲခံစားမိသည်။
အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုသိရန်သို့မဟုတ်ချစ်ရသူများထံလည်ပတ်ရန်စိတ်အားထက်သန်မှုသည်များသောအားဖြင့်ဝန်ပိနေသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို Jet Lag ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းသည်သင်ပိုမိုခရီးသွားလေ၊ ပိုမိုပြင်းထန်ပြီးကြာရှည်ခံသည်.
2 Jet Lag နဲ့မင်းတိုက်နိုင်မလား။
ပထမ ဦး စွာ Jet Lag အဘယ်ကြောင့်ပေါ်လာသည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အတွင်းနာရီရှိကြောင်းသင်ကြားဖူးပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ဒါကလုံးဝမှန်ကန်ပြီး circadian rhythm လို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီယန္တရားကအချိန်ဇုန်အသစ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အချိန်ယူတယ်။ ညှိနေစဉ်ခန္ဓာကိုယ်သည်ပုံမှန်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိတော့ပါ ခန္ဓာကိုယ်၏လုပ်ဆောင်မှုများစွာသည်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုမှ ဦး နှောက်လှိုင်းများအထိအတွင်းပိုင်းနာရီပေါ်တွင်မူတည်သည်.
သင်မကြာခဏပျံသန်းပါက Jet Lag ၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်သင့်အတွက်အလွန်အဆင်ပြေမည်မဟုတ်သော်လည်းသင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိမ့်မည်။ အချိန်ဇုန်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်:
ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်သိပြီးသားအတိုင်း Jet Lag ဟာယာယီသာဖြစ်တယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည်အလွန်ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသောစက်ဖြစ်ပြီးအချိန်အပြောင်းအလဲများနှင့်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့ကိုအချိန်ပေးဖို့၊ သူ့ကိုကြင်နာမှုပြဖို့လိုတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာရှင်းပြပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့်ရောဂါလက္ခဏာတွေပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန် ၂၄ နာရီမှတစ်ပတ်အထိကြာနိုင်သည်။။ ၎င်းသည်ခရီးအကွာအဝေးနှင့်အသက်ပေါ်မူတည်သည် (သက်ကြီးရွယ်အိုများပြန်လည်နာလန်ထူရန်ကြာသည်) ။
Jet Lag နဲ့မင်းတိုက်နိုင်မလား။
Jet Lag ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့တစ်ခုခုလုပ်လို့ရလား။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်နိုင်ရန်နှင့် ၄ င်းတို့ကိုလျှော့ချရန်ကူညီနိုင်သည့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပေးပါသည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Jet Lag ကိုဖယ်ရှားရန်အံ့ဖွယ်နည်းဖြင့်ကုသနည်းမရှိသော်လည်းသင်၏အတွင်းပိုင်းနာရီနှင့်ပြင်ပနာရီနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်သင်စောင့်ရမည်။ ဟုတ်တယ်၊ သင်၏အတွင်းပိုင်းနာရီကိုအခြေအနေအသစ်နှင့်ပိုမိုလျှင်မြန်စွာညှိနိုင်ရန်ကူညီရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနှင့်ထိရောက်သောအရာများပြုလုပ်နိုင်သည်.
Jet Lag ဆန့်ကျင်ရေးမဟာဗျူဟာသည်သမုဒ္ဒရာရေကြောင်းခရီးမသွားမီရက်အနည်းငယ်တွင်စတင်သင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရင်၊ သင်၏ ဦး တည်ရာ၏အချိန်ဇုန်နှင့်ကိုက်ညီရန်သင်၏အိပ်ချိန်အစီအစဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခြင်းသည်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အလွန်လွယ်ကူသည်။ သင်၏အိပ်ရာဝင်ချိန်ကိုတစ်ရက်လျှင်မိနစ် ၃၀ သို့မဟုတ်အထက်သို့ထားပါ။
သင်၏အချိန်ဇုန်အသစ်ပေါ် မူတည်၍ အစားအစာများနှင့်အတူတူပင်လုပ်ခြင်း၊ တိုးတက်ခြင်းသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးခြင်းတို့ကဒဏ်ခတ်မှုကိုပိုမိုနူးညံ့စေသည်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးအထက်မှာ Jet Lag မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတန်ဖိုးထားလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင့်ရဲ့အစားအစာကအာဟာရတွေများများစားစားပေးဖို့သေချာပါစေ။ အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ ခရီးစဉ်မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်၎င်းတို့သည်အိပ်စက်ခြင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောကြောင့်အရက်နှင့်ကဖိန်းဓာတ်များစားသုံးမှုကိုလျှော့ချရန်လည်းအကြံပြုသင့်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သင်လေယာဉ်ပေါ်ထိုင်သည့်အခါသင်၏နာရီသည်သင်၏ ဦး တည်ရာနိုင်ငံ၏အချိန်ကိုအမှန်ခြစ်ပါစေ။ စိတ်ပညာသည်အစွမ်းထက်သည်။ အချိန်ဇယားအသစ်ကိုသင်ကဲ့သို့စဉ်းစားလေလေ၊ Jet Lag နှင့် the မြန်မြန်ပြန်ကောင်းလာလိမ့်မည် နာရီများ သူတို့သည်သင့်အားသင့်ကိုနားလည်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ ဒါပေမယ့်သတိထားပါ၊ ဒါအရေးကြီးတယ်၊ လေယာဉ်ကိုမစီးခင်ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့၊
ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင်သည်သင်၏ ဦး တည်ရာကိုရောက်ရှိပါပြီ ယခုသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကြင်နာမှုပြခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုလဲ? အစကောင်းပါတယ် သင်အရမ်းပင်ပန်းနေလျှင်ရေအလုံအလောက်သောက်ပြီးခေတ္တခဏငေးပါ။ (အများဆုံး ၂ နာရီ).
ကောင်းသောညအိပ်စက်ခြင်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကပြန်လည်ထူထောင်ရေးအချိန်ကိုအကန့်အသတ်မရှိတိုးချဲ့မည်၊ လုံးဝအဆင်မပြေသောအရာ။ အိပ်ရာဝင်ချိန်ရောက်သောအခါ Jet Lag သည်အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ သင်အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်သင့် ဦး တည်ရာကိုပထမဆုံးညမှာအနားယူသင့်သည်။ မယ်လတိုနင်သည်သင့်ကိုလည်းကူညီနိုင်သည်။
နေရောင်ခြည်သည်သင်၏အတွင်းပိုင်းနာရီတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည် ဖြစ်နိုင်လျှင်နံနက်ယံ၌နေရောင်ခြည်များရေချိုးရန်အပြင်ဘက်သို့သွားပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းအချို့လုပ်ပါသို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်ရန်သွားပါ။
အထီးကျန်ခြင်းသည်ကောင်းသောစိတ်ကူးမဟုတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်သည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်သည့်အခြေအနေများတွင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေပါ။ လူများဝိုင်းရံထားခြင်းက Jet Lag ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » လေယာဥ်စီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောပင်ပန်းမှုဒဏ်ခံစားရခြင်း